Otu esi akwụsị ikwu okwu WordPress na CloudFlare - LinuxCapable
Otu esi akwụsị ikwu okwu WordPress na CloudFlare
October 5, 2021 by Jọshụa James
Mepụta WordPress Spam Iwu
Lelee WordPress Comment Spam Cloudflare ndekọ
Ikwu Spam, ihe otiti nke ịntanetị na weebụsaịtị ọ bụla nwere ụdị ntinye ọ bụla, yana WordPress ọtụtụ ndị nwe webụsaịtị na ndị nchịkwa ga-ama nke ọma ole spam nwere ike biputere kwa ụbọchị, ọkachasị ka weebụsaịtị gị na-etolite. Ugbu a, enwere plugins n'efu na akwụ ụgwọ, ụfọdụ na-arụ ọrụ mana enwere ogo dị iche iche nke ịga nke ọma, mgbe ahụ n'elu gị ọ nwere ike itinye igbu oge na saịtị gị na ịnwe itinye faịlụ ndị ọzọ maka captchas nke bụ ụdị kachasị dị irè iji belata spam ikwu ruo taa. .
Nkuzi na-esonụ ga-egosi gị ụfọdụ aghụghọ aghụghọ nwere iwu Cloudflare nke nwere ike ịrụ ọrụ na atụmatụ ọ bụla Free to Enterprise.
Chọrọ Software: WordPress - Site na Admin ma ọ bụ ọkwa onye nwe ya.
Ọrụ achọrọ: Igwe ojii - Site na Admin ma ọ bụ ọkwa onye nwe ya.
Nke mbụ, banye na akaụntụ Cloudflare gị wee gaa na ngalaba Firewall.
Na-esote, ị ga-achọ ịmepụta iwu firewall, nke a dịkwa mfe; pịa Mepụta iwu Firewall bọtịnụ.
Na-esote, ebe a ịkwesịrị ịkọwapụta aha iwu firewall, ubi, uru onye ọrụ, na ihe omume sochirinụ. Echegbula onwe gị. Maka ndị ọrụ bụ ndị novice na Cloudflare na WordPress, nke a dị nnọọ mfe, ma ị nwere ike itinye nke a na ọtụtụ ntinye ụdị plugins dị ka WP Forms. Mana maka ugbu a, soro ihe atụ dị n'okpuru na ịmepụta iwu maka azịza naanị.
Iji gafere ihe atụ dị n'elu.
Aha iwu: Aha iwu, jiri ihe atụ "WordPress Comment Spam Filter" ma ọ bụ kpọọ iwu aha ihe ọ bụla masịrị gị.
Ubi: Nhọrọ nke ọnọdụ ọnọdụ iwu na-emetụtakwa, nke a kwesịrị ịbụ "Ụzọ URI" maka nzacha ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Onye ọrụ: Nke a bụ eriri ọkụ ọkụ, site na ndabara nha, ahọpụtara ya, nke a adịghị arụ ọrụ nke ọma jide n'aka na ị pịnye "nwere" dị ka ọ dị nnọọ mkpa ka dakọtara akụkụ nke uru.
Uru: Dị ka aha ahụ na-egosi uru nke ihe ụlọ ọrụ gị na onye ọrụ na-adakọ na nke "wp-okwu.php". Jide n'aka na itinye .php ma ọ bụ ọzọ ụzọ URI nwere ike ime ihe ịma aka ma ọ bụrụ na otu uru dị na permalink.
Pịa Debe ozugbo emere ka iwu ahụ dị irè ozugbo. Daalụ, daalụ spam!
Ugbu a na-eme ka iwu gị rụọ ọrụ ma na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ ihe ịga nke ọma na ugboro ole mmadụ ma ọ bụ bot gbalịrị ikenye na ụdị nkọwa gị. Nke a bụ ọmụmaatụ sitere na Linuxcapable.com.
Dị ka ọ dị n'elu, n'ime awa 24, 5% nke ihe niile 20 kwuru bụ mmadụ n'ezie. Site na eserese ahụ, ị ​​​​nwere ike ịhụ spikes, ma na-ekwukarị spikes mgbe bots adaghị biputere ọtụtụ oge, ụfọdụ ọbụna karịa nke ahụ. N'ozuzu, akara 5% dị mma; nke dị ala, nke ka mma ọ pụtara igbochi bots karịa mmadụ. Ọ bụrụ na pasent ahụ dị na 90% n'ime 20, 9 n'ime 10 bụ ezigbo mmadụ, nke ahụ pụtara na ị na-ama ọtụtụ mmadụ aka karịa bots, mana nke a ekwesịghị ime ma ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ edepụtara n'ihu ọha.
Ị nwekwara ike ịpịgharịa na 5% data iji kpughee ọnụọgụgụ kama eserese.
Dị ka akọwara, ọnụego edoziziri ịdị ala pụtara na ị na-akwụsị ọtụtụ bots karịa mmadụ.
Ị nwekwara ike ịbanye n'ime iwu n'onwe ya maka ozi ndị ọzọ site na ịpị eserese mmanya mbụ.
Dị ka n'elu, ị nwere ike ịhụ stats na spam, yana nzacha Ihe omume, onye ọbịa, obodo, ASN, IP, Ụzọ, na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ihu ala, ibe ahụ na-ekpughe ozi ndị ọzọ.
Ozi a nwere ike ịdị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ụkpụrụ sitere n'aka onye na-eweta ma ọ bụ ASN ma nwee ndabara ahụ egbochiri ma ọ bụ gbaa aka ma ọ bụrụ na ị nweta ọtụtụ narị spam mgbalị kwa ụbọchị. Enwere ike ikwu otu ihe ahụ na adreesị IP. N'ụbọchị gara aga, adreesị IP nwara spam ugboro ugboro n'ime awa ole na ole; Eji Ngwa Cloudflare kpọchie IP ahụ ugbu a kpamkpam.
Site na ihe atụ, 1.1.1.1 bụ adreesị IP ihe atụ, yana ime ihe Block. Ọ bụrụ na ị na-akwado ọtụtụ weebụsaịtị, ị nwere ike itinye aka na webụsaịtị niile akwadoro na akaụntụ Cloudflare, nke kadị aka. Nhọrọ, ị nwere ike idowe ndetu na njedebe, nke bụ ezigbo echiche maka ebumnuche nsochi. Site na ndabara, Cloudflare na-enye iwu 50,000 IP ohere, ya mere imeju nke a ga-ewe oge; aro ga-abụ machibido ndị mmejọ ugboro ugboro kachasị egbu egbu.
Usoro Cloudflare nke ịkwụsị spam WordPress nwere ike iyi ihe dị oke egwu, mana mgbe etinyere ya n'ọnọdụ, spam ga-abụ okwu mgbe ị na-etolite saịtị gị. Iji plugins na-agbakwụnye igbu oge na saịtị ma na-eweta nsogbu nchekwa na-achọghị, ngwa mgbakwunye ọ bụla dị mma na-efu ego. Enwere ike iji usoro Cloudflare na akaụntụ efu, anaghị agbakwunye na oge ma ọ bụ akụrụngwa saịtị gị, ọ na-akpalite naanị mgbe mmadụ kpọkuru faịlụ wp-comments.php. N'ozuzu, ọ bụghị ihe akaebe zuru oke mana ọ ga-akwụsị spam na egwu ya ebe ọ bụ na a na-eme bots spam ọnụ ala. Ruo ugbu a, ebe etinyere ya na ngalaba anyị, ọ nweghị otu okwu spam enwetala. Ọ bụrụ na ọ bụrụ nsogbu, ọ ga-ekwe omume mgbe niile ịbawanye ya na hcaptcha kwesịrị ekwesị na otu ụkpụrụ ahụ.
Nye ya a na-agbalị, na ị nweghị ihe ga-atụfu ma ọ bụrụ na ị na-eji CloudFlare ugbua.
Categories Nkuzi CMS Tags Igwe ojii, WordPress Mail igodo
Otu esi etinye Nginx na Let's Encrypt TLS/SSL na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye Google Chrome Stable, Beta, ma ọ bụ na-adịghị akwụ ụgwọ na Pop!_OS 20.04
November 9, 2021 3: 28 am
Agbalịrị m iwu firewall gị, mana ọ dị nwute, ọ naghị arụ ọrụ
Zaa Derek Haines
November 9, 2021 6: 31 am
Ị na-eji nkwupụta WordPress nke ala? ma ọ bụ ihe dị iche dị ka wp-Discuz nke dị na ụdị ndị a? Ọ BỤRỤ na ọ chọrọ tweaking.
Enwere m ike nweta ozi ọzọ, ejiri m n'aka na anyị nwere ike ịchọpụta ya.
November 9, 2021 3: 15 elekere
Ee, m na-eji nkọwa obodo WordPress. Amaghị m ihe kpatara na ọ naghị arụ ọrụ maka m n'ihi na ọ dị ka ezi uche.
November 10, 2021 1: 26 elekere
Na-akpali mmasị, ị na-eji nwere na ọ bụghị nhata? Edeghị adreesị IP gị na ngalaba ngwaọrụ firewall?
Nnwale ọzọ, mgbe ụfọdụ ụmụaka edemede nzuzu na-eme obere DDoS na-eji ọrụ ọchụchọ WordPress eme ihe, ị nwere ike ịmepụta iwu ọhụrụ, kama ụzọ URI mepụta eriri ajụjụ URI, wee nwee onye ọrụ wee tinyezie. ?s=
Wee nwalee site na ịga na nchọ gị wee dee ihe na ya, ị nwere ike họrọ ụdị ịma aka. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ mgbe ahụ enwere m ntakịrị stumped.
Ọ na-achọsi ike ịnụ azụ
Daalụ ọzọ maka ozi ahụ.
November 10, 2021 7: 53 elekere
Amaghị m ihe m na-eme adịghị mma. Ma anaghị m mma na ihe a. Mgbe m chechara ya, ọ ga-ama ndị na-agụ akwụkwọ m aka. Ya mere ejiri m ihe ịma aka IP na ASN JS mee ihe na ngwaọrụ, ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma. Ejisiri m ike igbochi 90% nke ndị spammers. Akismet na-enweta nke ọzọ, nke bụ naanị 10-15 kwa ụbọchị kama 300-400. Ọ dị ntakịrị whack mole, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
November 11, 2021 3: 19 elekere
Ahụrụ m na ọ dị mma ịmara na enwere ike iji Cloudflare mee ọtụtụ ihe dị mma, enwere m ụfọdụ iwu ọdịnala ogologo oge na ite mmanụ aṅụ nke m na-eji fail2ban wepụ ezigbo bots ọjọọ. N'ozuzu, ejighị m n'aka ihe kpatara nke a anaghị arụ ọrụ na ọ kwesịrị ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwetara ụlọ iwu, ikekwe hapụ ya ka ị hụ ihe na-eme ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ị nwetara ya na ụzọ edoziri nke ọma ọ ga-arụ ọrụ ebe ọ bụ na ị na-akpọ wp-comments-post.php, echere m na iwu ọzọ nwere ike na-emegide onwe ya.
Dị ka ị na-ahụ na foto m ndị e sere na-arụ ọrụ, nkà na ụzụ ị nwere ike iji otu ahụ kwụsị search DDoS, na-eji ya na kọntaktị gị fọm, naanị ihe ị chọrọ bụ iji nweta .PHP faịlụ na-eji na-ekwurịta okwu (execue) mgbe. ịpị n'okpuru na Cloudflare ga-ahụ ya ma jiri ihe ịma aka.
Aga m eme nkuzi n'oge na-adịghị anya na ọtụtụ iwu Cloudflare, enwetara m ihe atụ 20 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụfọdụ nwere ike inye aka n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Daalụ maka ozi n'agbanyeghị.
November 16, 2021 9: 28 elekere
Daalụ maka ozi niile, Joshua. Aga m anwale usoro ahụ ọzọ wee hụ ma enwere m ihe ịga nke ọma.
November 17, 2021 7: 30 am
Ọ dị mma, Agụrụ m na ị na-egbochi okporo ụzọ bot na-ezighi ezi.
Iwu kachasị ọhụrụ m wepụtara bụ ime nke a kwa.
(http.user_agent nwere "Chrome/3" ọ bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere "Chrome/4" ọ bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere "Chrome/5" na ọ bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere "Chrome/6" ọ bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere "Chrome/7" ọ bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere). "Chrome/2" ọ bụghị cf.client.bot)
Ihe ịma aka java ahụ bụ ihe niile adịkwaghị adị site na ụdị sitere na 1. ruo 79. Ị nwere ike ịme 80 ruo 89, mana ewepụrụ m ya dịka ndị ọrụ ole na ole na-eji ụdịdị ndị a.
(http.user_agent nwere "Firefox/3" ọ bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere "Firefox/4" ọ bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere "Firefox/5" na ọ bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere "Firefox/6" ọ bụghị cf.client.bot)
Nke a na-egbochi ụdị firefox 3xx ruo 6xx. Ime 7, 8, na 9 dị aghụghọ n'ihi ESR na sistemụ Linux, mana ị ga-ehichapụ.
Mekwaa MSIE, ebe ọ bụ na ọ naghịzi adị
(http.user_agent nwere "MSIE" ọ ​​bụghị cf.client.bot) ma ọ bụ (http.user_agent nwere "Mozilla 4" ọ bụghị cf.client.bot)
Nke a na-agbaghakwa Mozilla 4.0, onye ọ bụla na-eji 5.0… Ọ na-eju gị anya ole bots na-eji 20 ochie dị afọ 4.0.
Naanị detuo na mado eriri ndị ahụ, gbanwee gaa na ngọngọ JS/Challenge, ma ọ bụ ihe ọ bụla. M ji nwayọọ nwayọọ malite nkuzi na iwu niile m maara, ụfọdụ m na-eji ụfọdụ m na-adịghị ma bara uru maka ndị ọzọ setups.
Ọzọkwa, iji kpuchie iwu ndị ahụ m jikọtara, agbakwunyere m ma ọ bụrụ na ọ bụ bot mara mma na CF dị mma ikwe, ọ bụ ezie na 99.99 adịghị, enwere m obi abụọ na CF ga-akwado bots site na iji ndị ọrụ ihe nchọgharị ochie 😛